Wararka - KF932 KF86 Relay Tijaabiyaha ayaa maray kormeerka qaraabada Qaranka
Ku takhasusay Tijaabada & Cabirka Awooda Korantada
Set Imtixaanka Relay Intelligent
Set Imtixaanka gudbinta Ilaalinta
Ilaha caadiga ah
Meter xoog badan
KF932 KF86 Relay Tester wuxuu maray kormeer qaraabo qaran
ku saabsan wararka
KF86 Set Imtixaanka Gawaarida Sirdoonka
Kaliya Oktoobar 19, 2020 ，
KINGSINE's cusub KF932 Xararad IEC61850-Tijaabiyaha &
KF86 Digital-Analog Dhamaan-in-1 Tijaabiyaha Relay Ilaalinta
Ka gudbay Tijaabada Nooca
By Xarunta Tamarta Qaybinta Badbaadinta Awoodda Qaranka Xarunta Baadhista Tayada
Iyo Machadka Cilmi baarista Awoodda Korontada ee Grid ee Xarunta Xaqiijinta Tijaabada,
Marka loo eego heerka kormeerka ee
DL / T-624-2010 aaladda tijaabada qalabka 'Microcomputer' tijaabinta xaaladaha farsamada &
DL / T-1944-2018 substations caaqil gacanta qalabka gacanta tijaabinta qalabka digniinta digital tilmaamaha farsamo &
DL / T-1501-2016 aaladda tijaabada ilaalada gudbinta dhijitaalka ah xaaladaha farsamada
Kuwaas oo dhammaantood hela ogaanshaha la aqoonsan yahay ee caalamiga ah ee CNAS-L1379 & PAL & ilac-MRA.
KF932 gacan-ku-haynta IEC61850 Testier ayaa door muhiim ah ka ciyaareysa ka shaqeynta nidaamyada tamarta korantada si kalsooni leh oo aamin ah. Waa aaladda tijaabada ee loo adeegsado qaybta xirfadeed ee ilaalinta microcomputer, ilaalinta gudbinta, cabbiraadda kicinta, iyo qalabka wax duuba.
U hoggaansanaanta heerka IEC61850, Loo adeegsaday gudbinta ilaalinta dhijitaalka ah, Cabbiraadda & aaladda xakamaynta, terminal caqli badan, Isku-darka Unit iyo nidaamka xakamaynta kaabidda iyo baaritaanka.
4.3 'Taabashada shaashadda iyo rada, si ay ula kulmaan caadooyin kala duwan oo la adeegsado.
4400mAh batari weyn oo lithium ah, shaqo joogto ah in kabadan 10 saacadood.
Cabbir yar, weight0.75kg culeys fudud oo la qaadi karo.
KF86 Compact IEC61850 6-phase relay imtixaanka oo lagu dejiyay saxnaan aad u sareysa & xal buuxa (u hogaansanaanta qiimaha IEC61850 iyo GOOSE), wuxuu si buuxda u buuxin karaa dhamaan shuruudaha ogaanshaha iyo ka-goynta IEC61850 IEDs, Iskuxidhka Unugyada, nidaamyada xakamaynta saldhigga iyo gudbinta ilaalinta dhaqanka.
8 dekedaha indhaha oo u hogaansamaya qiimaha muunadaynta IEC61850 iyo GOOSE;
6x130V danab iyo 6x20A saxan sare analog analog soo saar;
GPS-ku-dhex-dhex-dhexaad ah, taageer waxqabadka is-waafajinta IRIG-B;
9.7 inch taabashada taabashada & 10kg miisaanka si fudud loogu shaqeyn karo qadka ama laptop;
KINGSINE R&D waa koox aad u xirfad badan, oo ka kooban Dhakhaatiirta Dhakhtarka Kadib, Dhakhtarka, Masters iyo khubarada warshadaha.
Kooxda 'KINGSINE R & D' waxay si joogto ah u naqshadeyneysay wax soo saarka cusub ee horumarinta suuqgeynta ku habboon, sida Universal Relay Tester K3163i, Engybrick Power Monitoring Solution oo ah rakibid fudud iyo iwm.
Kingsine sidoo kale waxay leedahay farsamoyaqaanno iyo khubaro xoog leh waxayna awood u leedahay inay bixiso xalka tijaabada korantada ee la jaanqaadaysa qeexitaanka macaamiisha.
Iyada oo fikraddiisa hal-abuurka ah ee All-in-One iyo shatiyado badan, sheyga 'KINGSINE' si wanaagsan ayaa loo oggolaaday oo loogu taliyay Machadka Qaranka ee Sayniska iyo machadyada cilmi-baarista ee gobol kasta iyo sidoo kale shahaadada CE.
Waqtiga boostada: Dec-31-2020
Alaabada Featured, Khariidadda bogga,
Tijaabiyaha gudbinta farqiga u dhexeeya, Tijaabiyaha gudbinta sirdoonka, Tijaabiyaha Relay Ilaalinta, Tijaabada gudbinta, Imtixaanka gudbinta Dijital ah, Tijaabiyaha gudbinta Ilaalinta Fogaanta, Dhammaan Alaabooyinka